China PVB ဖြတ်တောက်ခြင်း နှင့် လေကာမှန်လိုင်း ဖြတ်တောက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် ထုတ်လုပ်သူ နှင့် ရောင်းချသူများ | Fuzuan
Glass လိုအပ်သည်- PVB ကြားလွှာပါသော လေကာမှန်များ
အများဆုံး Glass Size : 1850*1250 mm အနိမ့်ဆုံး Glass Size : 1100*400 mm
Glass Thickness: 3mm –6mm
ကွေး၏အတိမ်အနက်- Max. 350mm
အသုံးပြုမှု- PVB ပိုလျှံမှုကို ချုံ့ပြီး အရောင်တင်ပါ။
ဤ PVB Trimming စနစ်သည် မညီမညာ ဖြတ်တောက်ခြင်း ၊ လျှို့ဝှက်ထားသော ဘေးကင်းရေး ဘေးအန္တရာယ်များ ၊ သို့မဟုတ် မော်တော်ယာဥ် အပြင်အဆင်များအတွက် သင့်လျော်မှုမရှိသော ချို့ယွင်းချက်များ ၊ အထူးသဖြင့် အဆင့်မြင့် မော်တော်ယာဥ်များအတွက် laminated glass ၊ ယခင် အနုပညာ ဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းလမ်းများ တွင် ၊ အပြည့်အဝ အလိုအလျောက် ဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းလမ်း ၊ စက်ရုပ်ကား၏ laminated မှန်။
ဖန်သားကို အလှဆင်ပြီးနောက်၊ PVB သည် ဖောက်သည်တောင်းဆိုသော အရည်အသွေးကို အာမခံရန်အတွက် PVB ပိုလျှံမှုကို ဖြတ်တောက်ပြီး ပွတ်တိုက်ပေးရန် တောင်းဆိုသော PVB သည် 3-6 မီလီမီတာ ထွက်လာသည်။
Trimming/ Polishing သည် PVB (Multilayer) ၏ 2.1 mm အထိ ချုံ့နိုင်/ ပေါလစ်လုပ်နိုင်ရမည်၊
ချော/ပွတ်ထားသော PVB ၏အရောင်သည် တူညီသည်။
PVB ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ရိုးရာနည်းလမ်း
ဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက် manual tools များအသုံးပြုရာတွင် အောက်ပါ ချို့ယွင်းချက်များရှိသည်။
1. ဖြတ်တောက်ခြင်းသည် သပ်ရပ်မှုမရှိသည့်အပြင် ဖြတ်တောက်ခြင်းအရည်အသွေးသည် တစ်ပြေးညီမဟုတ်သောကြောင့် မော်တော်ကားမှန်အစွန်းများ အထူးသဖြင့် အဆင့်မြင့်မော်တော်ယာဥ်များအတွက် laminated glass ၏ ဖြတ်တောက်မှုလိုအပ်ချက်များကို မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါ။
2. ဓားများကို ကိုယ်တိုင်ဖြတ်တောက်ရာတွင် အချို့သော ဘေးကင်းလုံခြုံရေး အန္တရာယ်ရှိပါသည်။
မော်တော်ယာဥ် အကာအရံများ ဖြတ်တောက်ခြင်း။
ဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းလမ်းတွင် အောက်ပါအဆင့်များ ပါဝင်သည်-
အဆင့် 1: autoclave ဖိအားမြင့်ကုသမှုပြီးနောက် မော်တော်ယာဥ်၏ laminated မှန်ကို အနုစားခါးပတ်အနားသတ်ကိရိယာသို့ ရွှေ့ပါ၊ သို့မှသာ မော်တော်ယာဥ်၏ laminated glass အစွန်းသည် လှည့်နေသော abrasive belt နှင့် ထိတွေ့မှုရှိစေရန်၊
အဆင့် 2- လှည့်ပတ်နေသော ပွန်းပဲ့ထားသောမှန်ကို မော်တော်ယာဥ်အစွန်းအထင်းနှင့် ထိတွေ့ထားပါ၊ မော်တော်ကားအစွန်းတစ်ဝိုက်တွင် ကျန်နေသော အလယ်အလတ်ဖလင်ကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် မော်တော်ကားအစွန်းတစ်ဝိုက်တွင် ကျန်နေသော အလယ်အလတ်ဖလင်ကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် အဆင့် 2- မော်တော်ယာဥ်အင်္ဂတေဖန်နှင့် ဆက်စပ်နေသော မော်တော်ယာဥ်မျက်နှာပြင်နှင့် ပွန်းပဲ့ထားသောမှန်နှင့် ဆက်စပ်နေသော မော်တော်ယာဥ်မျက်နှာပြင်ကို ရွှေ့ပါ။ laminated မှန်။
မော်တော်ကား လေကာမှန်များ၊ ကွေးထားသော လေကာမှန်များ၊
FZPVBT-A အတွက် စွမ်းရည်- ≥ 20 စက္ကန့်/pc (စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသည်)
Max. အခြောက်ခံနှုန်း- 10m/min
● မှန်များကို စင်တင်ယာပေါ်ရှိ စင်တစ်ခုမှ စက်ရုပ်ဖြင့် ဒေါင်လိုက်ပုံစံဖြင့် ထုပ်ပိုးထားသည်။
● Glass ကို နေရာချထားခြင်းစနစ်ဖြင့် ဗဟိုပြုပါမည်။
● မှန်ကို ကွပ်/ပွတ်
● လှီးဖြတ်ပြီးနောက် အမှုန့်များကို အမှုန့်အိတ်ထဲသို့ စုပ်သွားပါမည်။
● Glass ကို conveyor wings တွင် အောက်သို့ချထားပါ။
ဤ PVB ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်သည် အဓိကအားဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
● နေရာချထားခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိသော သယ်ဆောင်သူ
● Belt Conveyor
အများဆုံး Glass အရွယ်အစား 1850*1250 မီလီမီတာ
အနိမ့်ဆုံး Glass Size 1200*400 မီလီမီတာ
Glass Thickness 3mm-6mm
မျက်မှန်၏ဦးတည်ချက် ခုံးတက်ဖြင့် (“တောင်ပံ” အောက်)၊
Bend ၏အတိမ်အနက် အများဆုံး 350 မီလီမီတာ
စွမ်းရည် ≥ 20 စက္ကန့်/pc (စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသည်)
စုစုပေါင်းပါဝါ 40 KW
ဖိထားတယ်။ 5-7 ဘား
အပူချိန် 18 ℃ ~ 45 ℃
● တည်နေရာပြယန္တရားအား servo မော်တာဖြင့် မောင်းနှင်ထားပြီး နေရာချထားခြင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် တည်းဖြတ်နိုင်ပါသည်။
● သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမော်တာအား ကြိမ်နှုန်းပြောင်းစက်ဖြင့် မောင်းနှင်ထားပြီး အမြန်နှုန်းကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။
● မှန်အစွန်းရှိ PVB ဖလင်ကို သဲကြိုးဖြင့် ကွပ်ထားသည်။
● ကြိတ်ဖိအားကို ဆလင်ဒါမှ ထိန်းချုပ်ပြီး ဖိအားထိန်းညှိသော အဆို့ရှင်ဖြင့် ထိန်းညှိသည်။
● ဖုန်မှုန့်များကို စုဆောင်းရန် ဖုန်စုပ်စနစ် တပ်ဆင်ထားသည်။
● ၎င်းသည် အထူးပွန်းပဲ့သော ခါးပတ်အနားသတ်ကိရိယာကို အသုံးပြု၍ ဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ မော်တော်ယာဥ်၏ laminated glass အနားရှိ ပိုလျှံနေသော အလယ်အလတ်ဖလင်များကိုသာ ကြိတ်ခွဲပြီး မှန်ပြားကို မကြိတ်ဘဲ ဖယ်ရှားနိုင်စေရန် အထူးပွန်းပဲ့သောခါးပတ်အနားသတ်ကိရိယာကို အသုံးပြုထားသည်။
● ၎င်းသည် ဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်း၏ မြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့် ဘေးကင်းမှုကို သေချာစေပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် ဖြတ်တောက်ထားသော မော်တော်ယာဥ်အကာအရံများကို သပ်ရပ်ချောမွေ့စေကာ အရည်အသွေးမြင့် မော်တော်ယာဥ်အသွားအလာမှန်၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့် အနားသတ်အသွင်အပြင်ကို ရရှိစေသည်။
● Automotive glass processing automation၊ processing of automation and manned processing ကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းက လုပ်သားကုန်ထုတ်စွမ်းအားကို မြှင့်တင်နိုင်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ခေတ်မီစက်မှုလုပ်ငန်းရှိ အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသော ထုတ်လုပ်မှုစနစ်တစ်ခုအဖြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေပါသည်။
ယခင်- လေကာမှန်အတွက် ခံနိုင်ရည်ရှိမှု ထောက်လှမ်းခြင်း အွန်လိုင်း GT မီးဖိုစစ်ဆေးခြင်း။
နောက်တစ်ခု: Glass palletizing စနစ် မော်တော်ကား automation လိုင်း
Glass palletizing စနစ် မော်တော်ကား အလိုအလျောက်စနစ် ...
Semi-auto Rain အာရုံခံကိရိယာ ကိုင်ဆောင်ထားသော စက်
မော်တော်ကား ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်း...
backlites အတွက် ကိုယ်တိုင်ဂဟေစက်
နောက်လေကာမှန်အတွက် အလိုအလျောက် ဂဟေစက်